प्रभु बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १६ असोज २०७६)
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रभु बैंकको नाफा ११२ दशमलव ०४ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. ९६ करोड ७० लाख ३५ हजार खुद नाफा गरेको बैंकले गत वर्ष रू. २ अर्ब ५ करोड ५ लाख ६४ हजार खुद नाफा गरेको छ । कम्पनीले लगानीकर्ताका लागि लाभांश दिन सक्ने वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब ७३ करोड ३८ लाख ९ हजार रहेको बताएको छ ।
बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताका लागि ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । बोनसपश्चात् बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ८९ करोड २६ लाख ७५ हजार पुगेको छ ।
2019-10-03 - 467 view(s) - abhiyandaily